Chii Chitsva muUbuntu 18.04 LTS Bionic Beaver | Linux Vakapindwa muropa
Chii Chitsva muUbuntu 18.04 LTS Bionic Beaver
Sezvo munhu wese achatoziva kare nezuro iyo yakagadzikana vhezheni yeUbuntu 18.04 LTS Bionic Beaver yakaburitswa zviri pamutemo pamwe nemamwe maratidziro ayo akadai seKubuntu, Xubuntu, Lubuntu, zvichingodaro.
Maawa mashoma apfuura ma link ekurodha pasi akagoneswa iyo system, kubvira nekuda kwekukanganisa kweminiti yekupedzisira kuvhurwa kweiyi vhezheni itsva kwakakanganiswa uye kuvhurwa kwayo kwakanonoka.
Zvakanaka, yaingova nguva isingasvike maawa mashanu kuti zvivatorere kugadzirisa ichi chikanganiso chidiki. Dare rekuvandudza Canonical rave nezvipingamupinyi zvinoverengeka zvakamuka kusvika gore rino mukuvandudza kweshanduro iyi nyowani.
Asi mushure mezvose, isu pakupedzisira tinova nazvo kuti titore iyi vhezheni yeUbuntu 18.04 LTS uye titange kunakidzwa neiyi huru sisitimu.
1 Chii chitsva muUbuntu 18.04
1.1 Minimal Ubuntu 18.04 LTS kuisirwa
1.2 Nezve iyo system
Chii chitsva muUbuntu 18.04
Sekuziva kwese munhu, maLTS vhezheni ane tsigiro yakawanda kupfuura zvakajairwa kuburitswa, saka kuburitswa uku ndekwenguva refu rutsigiro rwe iyo LTS edition iyo Deskop, Server uye Core vhezheni ichagamuchira rutsigiro kwemakore mashanu nepo iyo Ubuntu Studio vhezheni yemwedzi mipfumbamwe chete.
Minimal Ubuntu 18.04 LTS kuisirwa
Mushure menguva refu Canonical yashandura iyo yekumisikidza system, tichakwanisa kuona shanduko iyi panguva yekumisikidza nekuti pakutanga, Ivo vanozobvunzwa kana vachida yakajairwa kana kushomeka kumisikidzwa.
Iko kuisirwa kushoma kusinga sanganisira email, girafu kana hofisi mutengi mapakeji zvinongosanganisira zvechinyakare mushandisi zvirongwa uye Firefox inowanikwa
Nezve iyo system
Iyi vhezheni yeUbuntu 18.04 inounza Kernel 4.15 iyo yakanyorwa zvakare nemamwe mataki kuti agadzirise mashandiro ehurongwa, pamwe nekugadzirisa matambudziko ekuchengetedza.
Mune vhezheni yapfuura yeUbuntu vakomana veCanonical vakaita sarudzo yekumisikidza seWayland seyakasarudzika, izvo zvakavatorera kushoropodzwa uye matambudziko ekuenderana nezvirongwa zvakasiyana.
En iyi nyowani shanduro vakaita danho zvakare ndokudzoka kuzotora Xorg server seyakakosha yeiyo system. Uye chokwadi ndechekuti yaive yakanaka kwazvo, haisi yekuzvidza Wayland, iyo graphic server yakanaka, asi ichiri kushaya zvinhu zvakawanda zvekugona kushandiswa mumusika unodawo zvakanyanya.
Kune rumwe rutivi, isu tinoenderera mberi neGnome desktop nharaunda, sezvo kubva pane yayo yapfuura vhezheni kwakasarudzwa kusiya iyo Kubatana chirongwa uye sarudza kutangazve Gnome. Mune iyi vhezheni 18.04 inouya neGnome 3.28 pamwe nerutsigiro rweThunderbolt 3 kubatanapamwe neiyo itsva GNOME To Do app.
Kana zviri zvimwe zvishandiso zveGnome, tinogona kusimbisa kuti iyo GNOME Calendar yatove nerutsigiro rwekufungidzira mamiriro ekunze, iyo GNOME Mabhokisi ikozvino inopa kuita kuri nani kune Spice vatengi, sezvo ichito sanganisira iyo spice-vdagent ye
Uyewo isu tine LibreOffice 6.0 sezvo default office suite pane system uye OpenJDK 10 ndiyo JRE / JDK, ivowo vari chikamu cheyakaunganidzwa muunganidzwa.
Pakupedzisira sarudzo yakaitwa kusanganisa basa rekuunganidza dhataKuti ugadzire zviverengero uye vakomana veCanonical vanokwanisa kunyatso mepu zvishuwo zvevashandisi sisitimu iyi, iri basa rinokumbira mvumo yako yekuti inogona kupinda mukushanda kana kwete.
Iyi ndiyo data iyo ichaunganidza kana iwe ukapa yako mvumo:
Ubuntu vhezheni uye flavour yauri kuisa
Kana iwe uine network yekubatanidza panguva yekumisikidza
Hardware manhamba senge CPU, RAM, GPU, nezvimwe.
Nguva inodiwa yekupedzisa kuiswa
Kunyangwe iwe uchisarudza otomatiki login, kuisirwa wechitatu-bato macodec, kurodha pasi kwekuvandudzwa panguva yekuisirwa
Iyo Ubuntu Popcon sevhisi inoteedzera kufarirwa kwekushandisa uye mapakeji
Mhedzisiro yedata yakatorwa kudaro ichave inowanikwa kune veruzhinji nekuda kwekuongorora zvinangwa.
Kuti utore Ubuntu 18.04 LTS kana chero ehumwe kunaka kwayo, iwe unofanirwa kuenda chete kune epamutemo mapeji ewebhu emapurojekiti uye iwe uchawana zvinongedzo zvatovepo zvekurodha pasi
Yakazara nzira kuchinyorwa: Linux Vakapindwa muropa » GNU/Linux » Kugoverwa » Chii Chitsva muUbuntu 18.04 LTS Bionic Beaver
Carlos Eduardo Solano Ramirez akadaro
Zvakanaka !!! Inokurumidza uye yakashongedzwa! Parizvino, yashanda zvakakwana kwandiri!
Pindura Carlos Eduardo Solano Ramírez
Paradox inozivisa Stellaris: Nyeredzi Dziri Kure, paketi nyowani ine nyaya nyowani